Qaar kale waxay /
software multifunction The oo taageero ka technology casriga ah, taas oo loogu talagalay ilaalada video u sarreeyey shay gaar ah ama degaanka.
Qalab wax ku ool ah si loo xakameeyo lacagta. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u la socdaan kharashyada ama dakhliga iyo tarjumayaan boos dhaqaale ee foomka of garaafyo.
Software ee u goobaha inta badan la isticmaali ay helaan haboon. Software waxay siisaa inay helaan deg deg ah meelaha ugu cadcad by keenshaliga links ku Taskbar.
qalab heer sare ah waxaa loogu talagalay si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ka mid ah dadka indha la 'si ay u maareeyaan computer oo uu joogaa internetka.
Software ayaa u helaan in ay database ee ururka mulkiileyaasha. Software ayaa awood u siineysaa inay baadhaan xogta lagama maarmaanka ah, maareeyaan kafado xisaab iyo taariikh u arkaan bixinta wararka.
Software in la abuuro oo la maareeyo geed qoyska. Software taageertaa abuuro ee gooldhalinta qoyska ah qaabab kala duwan oo ka raadin macluumaadka ku saabsan awowayaashood in database dadweynaha.
Microsoft Office Excel Viewer 12.0.6320.5000 iyo 12.0.4518.1071
Software in uu ordo, aragtida iyo ku daabicin, miisaskii elektaroonik ah qaab Excel ah. Software ayaa u saamaxaaya in ay u arkaan in waraaqaha ee hababka kala duwan oo la beddelo faahfaahin qaar ka mid ah bogga.
Editor ayaa graphic iyadoo balaadhan oo ah functionalities. Software ayaa ku siinayaan shaqada oo mashaariic ka fudud ama mid kakan oo awood u siineysaa inay iyaga ku badbaadin qaabab kala duwan.
Ku haboon qalab si ay ula xiriiraan taageerada adeegyada caanka ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod, farriimaha qoraalka iyo sarrifka files.
Virtual DJ 8.2.3994 iyo 7.4.7
SUPERAntiSpyware 6.0.1250 Free Edition iyo Professional